Redmi 7: Nkọwapụta, ọnụahịa na mwepụta gọọmentị | Gam akporosis
Otu izu gara aga ka emepụtara Redmi Note 7 na Spain, nke Xiaomi gosipụtara na Spain. N'ime ya, ọ dabara na ika ga-eweta ụdị ọhụụ na ezinụlọ a n'oge na-adịghị anya. Ihe mechara mee na ngosi nke Redmi 7. Anyị na-eche ihu ihe nlereanya ọhụrụ na nso nso,
- Xiaomi na-enye Redmi 7 iwu, ihe omuma ohuru maka uzo ntinye nke ika. Ọ bụ ihe nlereanya nwere nkọwa nke na-ezute nke ọma n'ozuzu ya, yana atụmatụ dị ugbu a na nnukwu uru maka ego. Yabụ ọ nwere ike ire ọfụma na mpaghara ahịa a.
Banyere imewe, anyị na-ahụ a nnọọ fashionable imewe taa na nke a Redmi 7. Chinesedị ndị China ahọrọla ihuenyo na akara ngosi na ọdịdị nke mmiri mmiri, nke anyị na-ahụ ọtụtụ na ụlọ ahịa taa. Na mgbakwunye, a na-etinyekwa ya na igwefoto abụọ na ya.
1 Nkọwapụta Redmi 7
Nkọwapụta Redmi 7
Offọdụ n'ime nkọwapụta ihe nlere a izu ndị a. Ọ bụ ezie na ọ bụ n'ikpeazụ ukara, otú anyị nwere ike ịhụ ihe bụ eziokwu na ndị a leaks n'izu ndị a. Modeldị ntinye larịị, nke nwere oke ike yana nkọwapụta zuru oke. Ihe ndị a bụ nkọwa nke Xiaomi's Redmi 7:
Ihuenyo: LCD 6,26-inch na HD + mkpebi nke pikselụ 1520 x 720 na nhazi 19: 9
NhaziAha nhazi: Snapdragon 632
Nchekwa: 16/32/64 GB (Gbasaa na microSD)
Rear igwefoto: 12 + 2 MP na ikanam Flash
Igwefoto n'ihu: 8MP
Njikọ: 4G / LTE, SIM abụọ, Bluetooth 5, WiFi 802.11 Dual, redio FM, microUSB
Akụkụ: X x 158.7 76.4 8.9 mm
Ibu ibu: 180 grams
Usoro njikwa: A gam akporo 9.0 achịcha na MIUI 10
Ọ bụ mmeghari ohuru nke ụdị ika China, nke ọtụtụ ndị na-atụ anya ugbu a. Anyị na-ahụ imepụta emelitere, na-agbaso usoro ahịa nke ịkụ nzọ na ọkwa dị ala dị ka mmiri mmiri, nke anyị na-ahụ n'ọtụtụ smartphones, dị ka ika ika Redmi Rịba ama 7 e kpughere na Jenụwarị.
Dị ahụ na-esonye na ojiji nke ngebichi, gụnyere usoro a, nke ha kwuru na ya eme atụmatụ iji obere ngebichi n'ọdịnihu. Maka nhazi nke Redmi 7 a, akara ndị China ahọrọla enyi ochie na ahịa dị ka Snapdragon 632, otu n’ime ihe ndị kachasị mkpa n’etiti etiti, dịtụ ọpụpụ karịa n’ahịa. Na mgbakwunye, anyị na-ahụ njikọta dị iche iche nke RAM na nchekwa na ekwentị. Ya mere enwere nhọrọ.
Maka ndị ọzọ, anyị nwere ike ịhụ na ekwentị ahụ na-ejikwa igwefoto azụ abụọ. Na nke a, ọ bụ nchikota nke 12 + 2 MP, nke na-enye ndị ọrụ ohere iwepụta foto dị mma. Ọ bụ ezie na n'ihu ejirila igwefoto 8 MP mee ihe. E gosipụtara igwefoto dị na ekwentị ahụ site na ọgụgụ isi. Batrị bụ otu n'ime ike nke Redmi 7 a, nke nwere ikike nke 4.000 mAh, nke doro anya na-enye anyị arụmọrụ dị mma n'oge niile.
Dị ka ọ dị na mbụ n'okwu ndị a, emechiela ekwentị ahụ na China. Ọ bụ ezie na ugbu a, anyị amaghị ihe ọ bụla gbasara mbupụta mba ụwa ọ ga-ekwe omume. Ihe a na - emebu bu na emepere uzo a na Spain. Ya mere, anyị nwere ike ịnwe akụkọ banyere ya n'oge na-adịghị anya. Anyị ga-ege ntị na nke a.
Ihe anyị maraworị bụ ọnụahịa nke ụdị dị iche iche nke Redmi 7 a nke akara China. Ebe ọ bụ na ọnụahịa ha na China bụ nke gọọmentị, nke na-enye anyị echiche nke ihe anyị ga-atụ anya ya. Dị ka atụ anya, ha bụ ọnụ ala dị ala. Ndị a bụ ọnụahịa ha:
Versiondị ya na 2GB / 16GB dị ọnụego 699 yuan ma ọ bụ euro 92 na mgbanwe ahụ
Ihe nlere anya nke 3GB / 32GB bu 799 yuan (ihe dika euro 105 iji gbanwee)
Versiondị nke nwere 4GB / 64GB na-efu yuan 999, nke bụ ihe dị ka euro 131 iji gbanwee
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Redmi 7: Uzo ntinye ohuru nke Xiaomi bu ihe ndi ozo
Samsung Galaxy A50 bịarutere Spen na gọọmentị